Puntland oo xirtay saddex idaacadood - BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal
Puntland oo xirtay saddex idaacadood
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 4 Abriil, 2013, 03:51 GMT 06:51 SGA
Masuuliyiinta maamul goboleedka Puntland ayaa xiray saddex idaacadood oo madax banaan oo ka hawlgala gobolkaasi. Idaacadaha la xiray ayaa waxa ay kala yihiin One Nation, Radio Daljir iyo Idaacadda codka Nabadda.
Masuuliyiinta maamul goboleedka Puntland ayaa xiray saddex idaacadood oo madax banaan oo ka hawlgala gobolkaasi.
Idaacadaha la xiray ayaa waxa ay kala yihiin One Nation, Radio Daljir iyo Idaacadda codka Nabadda.
Warqad amar ah oo ka soo baxday wasiirka warfaafinta iyo taliyaha booliiska ayaa masuuliyiinta idaacadaha ay sgeenee in loo keenay, kuwaasi oo lagu amray inay xiraan idaacadaha.
Haddaba waxaanu ka wareysanay sababta idaacadahaasi loo xiray Faadumo Yusuf Saciid oo ah Agaasimaha idaacadda One Nation.